छोटो समयमै ज्यान लिने एपेन्डिसाइटिस रोग के कसरी लाग्छ, यसका लक्षण कस्ता हुन्छन ? - Purbeli News
छोटो समयमै ज्यान लिने एपेन्डिसाइटिस रोग के कसरी लाग्छ, यसका लक्षण कस्ता हुन्छन ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ०२, २०७५ समय: १८:२६:३३
कोही एपेन्डिसाइटिसलाई राम्रो व्याक्टेरियाहरुको घर भन्छन्, भने कोही यसलाई काम नलाने अंगको रुपमा लिन्छन् । एपेन्डिसाइटिस ठूलो आन्द्राको पुछारमा हुन्छ । हातको औला जस्तो देखिने चार इञ्च लामो यो अंगमा जब अवरोध हुन्छ, त्यतिबेला एपेन्डिक्स हुन्छ। एपेन्डिक्स एक प्रकारको मेडिकल इर्मजेन्सी हो । एपेन्डिक्स भएको २४ घण्टा देखि ४८ घण्टाभित्रमा शल्यक्रियाद्धारा यसलाई नहटाए विरामीको ज्यान समेत जानसक्छ ।
जबकी एपेन्डिक्स भएमा दुखाई निश्चित हुन्छ । त्यस्तो दुखाई नाइटो वरिपरि सुरु भई बढ्दै जान्छ । त्यसबाहेक, यदी तपाईलाई १२ घण्टा भन्दा बढी वाता तथा पखाला छ र सहनै नसक्ने पेट दुखेको छ भने पनि तपाईलाई एपेन्डिक्स भएको हुनसक्छ । जहाँ एपेन्डिक्स छ । यस्तो समस्या भएमा तुरुन्तै चिकित्सकसितको सल्लाह लिनुपर्छ । विभिन्न अनलाइनहरू